गलत रिर्पाेट बनाएर बलात्कारी उम्काउन खोज्ने २ डाक्टर अख्तियारको फन्दामा ! - Everest Dainik - News from Nepal
गलत रिर्पाेट बनाएर बलात्कारी उम्काउन खोज्ने २ डाक्टर अख्तियारको फन्दामा !
जनकपुर, कार्तिक १६ ।
बलात्कारका आरोपी बचाउन स्वास्थ्य परिक्षणको गलत प्रतिवेदन बनाउने दुईजना डाक्टर भ्रष्टचारको मुद्दामा मुछिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुर अंचल अस्पतालमा कार्यरत् डा. विजयकुमार सिंह र डा.रम्भा गोइतविरुद्ध आज भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको हो।
आयोगका अनुसार, इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरी, धनुषाले अनुसन्धान गरेको ८ भदौको बलात्कारसम्बन्धी घटनामा डाक्टरद्वय सिंह र गोइतले गलत प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस मुख्यमन्त्री नै झाडू बोकेर जनकपुरका सडकमा
प्रहरीले बलात्कृत भएकी १२ वर्षीय बालिकालाई अस्पतालमा स्वास्थ्य परिक्षणका लागि लगेको थियो। अस्पतालमा डाक्टर सिंह र गोइतले चिकित्सकले न्यूनतम गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने कार्य समेत नगरी अनुसन्धान कार्य प्रभावित गर्ने गरि स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
पीडितले जनकपुर अस्पतालको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेपछि जिल्ला अस्पताल सिरहामा बालिकाको स्वास्थ्य परिक्षण गराउँदै अख्तियारमा समेत निवेदन दिएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस जनकपुरमा तनावग्रस्त, राजपाका ४१ नेता गिरफ्तार
आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार, सिंह र गोइतले पदको दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानमा प्रमाणित भएको छ। र सिरहा जिल्ला अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनले अघिल्लो प्रतिवेदन गलत रहेको प्रमाणित गरेको हो।
आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा दर्ता नम्बर ३१५५० रहेका डाक्टर सिंह र दर्ता नम्बर १०२०६ रहेकी गोइत विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिमको सजाय मागदाबी गरेको छ। ऐन अनुसार, दुबैलाई तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।
याे पनि पढ्नुस गिट्टी लिएर ५३ डब्बासहितको रेल जनकपुर आइपुग्यो